Debian 9.0 "Tambanudza" inopinda yekupedzisira chikamu chekusimudzira | Linux Vakapindwa muropa
Debian 9.0 "Tambanudza" inopinda yekupedzisira chikamu chekuvandudza
Isu takatozivisa kare kare kuti Debian 9.0 yaive mukuvandudza, chirongwa che macro uye nharaunda huru kuseri kweiyi distro havana kumira kushanda uye iye zvino mushambadzi Jonathan WIltshire akazivisa kuti inozivikanwa GNU / Linux distro yapinda muchikamu chekupedzisira chekuvandudza, uye kuti yakaomeswa nechando kubvira muna Kukadzi 5 , 2017. Naizvozvo, zvitsva zvinoshanda hazvichazowedzerwa, isu tinongoshanda chete kugadzirisa zvikanganiso uye kuvhara kusagadzikana kuita kuti igadzikane uye yakasimba pakuburitswa kwayo.
Debian GNU / Linux 9.0 ichave iine codename "Tambanudza" sezvatakatotaura kare. Kune avo vasingazive, mazita eiyo distros anotorwa kubva kune mavara eanonakidza firimu Toy Nyaya. Zvisinei neizvi, idanho rakakura kwete chete kune iro chirongwa cheDebian chakadai, asiwo kune zvese zvinogoverwa zvinoenderana zvakananga pachigadziko ichi, senge Ubuntu uye zvigadzirwa. Iye zvino iwe unenge uine yakasimba yakasimba hwaro zvidhinha zvekuvakira zvinhu zvikuru pairi.
Sezvandataura, hakuzovi nekuwedzera kutsva yemapakeji kudzamara sisitimu yaziviswa GA (General Inowanikwa), yakagadzirira kubuda uye kuti tese tinogona kunakidzwa nayo zvakananga kana zvisina kunangana. Zvichatora nguva yakareba sei kuti ubude kunze kunoenderana nechikamu pane zvakakomba zvipembenene zvavanofanira kugadzirisa uye zvimwe zvekupedzisira-maminetsi ekuvandudza anovharira kuvhurwa kwavo. Nekudaro, iwe unogona kutombozviedza kubva kune yepamutemo chirongwa webhusaiti, kana kurodha dzakagadzikana dzakapfuura shanduro kana usati uchiziva nezve ino naka distro ...
Zvisinei, Hazvizoiti refu yeDebian 8.0 "Jessie" kuti ave neyemhando yepamusoro kutsiva, kunyangwe isu tisingazive zvechokwadi iro zuva rinouya. Tinogona chete kumirira kuti tive nedzimwe nhau uye tinoda kuyedza kuti tione kufambira mberi kwavakaita mune iyi yazvino vhezheni yeprojekti, iyo isingangokanganisa nyika yeLinux chete, nekuti sekuziva kwako, Debian inogoverwawo nedzimwe mhodzi, senge kFreeBSD, HURD, nezvimwe. Kana uchifarira, ndinokukoka kuti uende iyo webhusaiti yeprojekiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Debian 9.0 "Tambanudza" inopinda yekupedzisira chikamu chekuvandudza
Ndiri kutarisira iyi vhezheni nyowani yeakanaka dunhu. Ndine rinenge gore naro uye rakanditora nekusimba kwaro.
MacOS kunyorera kuchasvika paGnu / Linux gore rino
OpenEXPO inotangisa eBook pane yakavhurwa sosi uye yemahara software maitiro